HomeWararka CiyaarahaChelsea 2-0 Tottenham: Silva iyo Ziyech oo Blues ka Caawiyay guul ay ku gaartay Stamford Bridge
January 24, 2022 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Ingiriiska 0
Antonio Conte ayaa laga jabiyay rekoodhka guuldaro la’aanta ee Premier Leaque-ga iyada oo uu tababaraha Tottenham uu Chelsea kala kulmay guul-daro 2-0 kulan ka dhacay garoonka Stamford Bridge.
Gool uu si qurux badan u dhamaystiray Hakim Ziyech iyo mid Thiago Silva ku dhaliyay madax bilawgii qaybtii danbe ee ciyaarta ayaa Blues guushan ku gaadhay iyada oo noqotay kooxdii ugu horaysay ee 500 dhibcood ku dhaafta kulamada London derby ee horyaalka Premier league.
waxay u ahayd guuldaradii ugu horeysay ee horyaalka kasoo gaarto Tottenham tan iyo markii ay 3-0 kaga badiyeen gurigooda Manchester United bishii October taasoo keentay in shaqada laga ceyriyo Nuno Espirito Santo.
Guuldarada ayaa la macno ah in Spurs ay ku sii jirto kaalinta todobaad, ka dib markii ay lumisay fursad ay kaga gudbi lahayd Arsenal, West Ham iyo Manchester United si ay ugu soo baxaan afarta sare.
Chelsea ayaa 10 dhibcood u jirta kooxda hogaanka haysa ee Manchester City, iyagoo ciyaaray kulamo ka badan labada koox ee u sareysa, iyadoo Liverpool ayaa sidaasi oo ay tahay dhibac wali ka sareysa Blues.